Ezona ziqholo ze-unisex zibalaseleyo ukuze wabelane neqabane lakho | Amadoda aQinisekileyo
Yonke into efuna ukulingana iya iphumelela. Kwaye oku kuchazwe kakuhle kakhulu ngu yefashoni, ethi yona inike ngokuqhubekayo iingubo ze-unisex ezifanelekileyo kuzo zombini izini. Kodwa kwakude kudala ngaphambi kweempawu, yayingabemi, ezinye iifashoni, ababenesibindi sokunxiba iziqwenga zohlobo lwabo olwahlukileyo. Ngapha koko, siyibona rhoqo phakathi kweempembelelo. Ewe, ilizwe leziqholo kunye neziqholo lifune ukuthatha inyathelo lokulingana. Nangona zingekho ezininzi iimveliso ezingakhange zibe nesibindi, ezinye ziyathanda UCalvin Klein Basinike inketho iminyaka iziqholo ze-unisex.
1 Kutheni iziqholo zinesini?
2 Kutheni unxiba iziqholo ze-unisex
Kutheni iziqholo zinesini?
Ngaphambi koko, iimveliso zazinikezelwe ekudaleni iziqholo ezicacileyo. Ezinye zazijoliswe emadodeni kwaye ezinye zijolise kubafazi. Kwaye kwenziwa njani oku? Ngokusebenzisa iziqholo ezinomtsalane kunye nevumba. I-rose, i I-jasmine okanye i-lavender yayingamavumba ahambelana ngokucacileyo nabasetyhini. Endaweni yoko, i-oki okanye i-citrus yayinxulumene neziqholo zamadoda. Kwaye kunjalo iminyaka emininzi.
Ngaphandle koku, nangona kunjalo, abanye abantu basetyhini kunye nabesilisa baba nesibindi sokunxiba iziqholo zesini sabo. Kwaye kulula ukuyiqonda, kuba sithetha ngeziqholo, kwaye iincasa zibonakala kakhulu. Kwaye indibaniselwano yeziqholo kunye nohlobo lwentlalo ngokupheleleyo. Kungenxa yoko le nto iimveliso ezininzi zibheja kwiziqholo ze-unisex iminyaka. Ngamanye amagama, zenza iziqholo ezingabhalwanga, ngevumba elimnandi nelithandekayo, elinokuthi nabani na avakale ukuba bangazisebenzisa.
Kutheni unxiba iziqholo ze-unisex
CK inye, umzekelo wesiqholo se-unisex
Ukuba kukho uphawu lophawu kwimarike yeziqholo ye-unisex, nguCalvin Klein, izindululo zayo ezimbini zakudala: UClavin Klein wamafutha y CK Inye Ibe ngumlinganiso weziqholo ze-unisex iminyaka emininzi. Iziqholo ezibini ezitsha nezifanelekileyo zemihla ngemihla.
Kutheni unxibe isiqholo se-unisex? Ewe, kuba akukho mntu unokukuxelela ukuba leliphi ivumba elimnandi oza kulisebenzisa ngenxa yezizathu zesini. Kungenxa yokuba indawo efanelekileyo iya kuba nakho ukukhetha ngokukhululekileyo Elo livumba nevumba elibonakalisa thina kakhulu, eyona nto siyithanda kakhulu kwaye yeyona nto ilungele thina. Lo ngumceli mngeni kushishino, uninzi lweempawu esele zijongile.
Akukho vumba luphawu lohlobo oluthile, lo ngumbutho wentlalo owenziwe ngumntu, ngakumbi ishishini. Ke ngoko, ukuba umntu uchonga yonke into eneentyatyambo, unokusebenzisa ngokugqibeleleyo isiqhumiso se rose. Kwaye ukuba umfazi uchonga ngokutsha kwe-citrus, uya kuziva kamnandi ngesiqholo esinuka ngoluhlobo.
Ukongeza, siyaya intengiso eya isanda ngokwanda, Esinika iziqholo ezintsonkothe ​​ngakumbi, ezinevumba elahlukileyo nelinomdla kakhulu. Kungumcimbi wokufumana ivumba elibonakalisa thina kakhulu, sishiya ecaleni nokuba ngamadoda okanye ngabasetyhini.
Akumangalisi ukuba sibona ngakumbi nangakumbi iziqholo ze-unisex ezivenkileni kwaye uyeke ukubona umahluko ocacileyo phakathi kweziqholo zamadoda neziqholo zabafazi. Umahluko ophawulwe kukuqhushumba kweshishini, kwaye oko kuphawule imbali yeli candelo liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iifumba » Ezona ziqholo ze-unisex zibalaseleyo ukuba sabelane ngazo njengesibini
Inqaku elihle. Isiqholo asinantlobano zesini
Izicwangciso zosuku lweValentine kunye nezipho